साल्ट ट्रेडिङको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन आज , साधारण सभा कहिले ? - Laltin Media
Home»सेयर बजार»साल्ट ट्रेडिङको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन आज , साधारण सभा कहिले ?
साल्ट ट्रेडिङको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन आज , साधारण सभा कहिले ?
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज सोमबार अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीले साधारणसभा गर्ने र साधारणसभा प्रयोजनका लागि चैत १५ गतेदेखि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसकारण आज चैत १४ गतेसम्म कायम सेयरधनीले सभामा भाग लिन र लाभांश पाउन सक्नेछन् ।
कम्पनीले चैत ३० गते ५५ औ वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । साल्ट ट्रेडिङले साधारणसभामा सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको १० प्रतिशत बोनश सेयर विशेष प्रस्तावको रुपमा पेश गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजी २३ करोड ४ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात २ करोड ३० लाख रुपैयाँ बोनस सेयर जारी गर्ने भएको हो । प्रस्तावित बोनस शेयर पछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १०५ (१) को खण्ड (ख) बमोजिम ऋण सुविधा लिने स्वीकृती उपर छलफल गरी पारिन गर्ने विशेष प्रस्ताव रहेको छ ।
५५ औ वार्षिक साधारणसभाको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गर्ने प्रस्ताव रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित आर्थिक वर्षको वासलात, नाफारनोक्सान हिसाव र नगद प्रवाह विवरण लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरी पारित गर्नेछ । लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गर्नेछ ।
साधारण सभा कहिले ? साल्ट ट्रेडिङको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन आज